Ezine-in-nye ubambo ngokutshintshiselana AC ukuhlangabezana ezihlangeneyo components AMJ2-4003H / 1003HX4 - China Shanghai IPKIS
Ezine-in-nye ubambo ngokutshintshiselana AC ukuhlangabezana amacandelo ezihlangeneyo AMJ2-4003H / 1003HX4
busbar kuhlanganiswa licandelo AMJ1 Overview i zeemodyuli licandelo osuka eyenzelwe yi IPKIS yesigaba ezintathu-isebe multi-isebe Ukuhlanganiswa yangoku. Isakhiwo Ngokomzi kwaye mhle, kwaye uqhagamshelwano kulula kwaye bakhuselekile. Ngokuyilwa seemodyuli, ngokusebenza nzima Umgca lahlule ke lula ukuba nsinya nje screwdriver. Kwangaxeshanye, lo mnqongo ukuba spliced ​​ngokweemfuno yesebe kanye, leyo usindisa kakhulu iindleko zabasebenzi kunye neendleko isithuba, kwaye connec ...
AMJ1 component busbar ezihlangeneyo is a zeemodyuli licandelo osuka eyenzelwe yi IPKIS yesigaba ezintathu-isebe multi-isebe Ukuhlanganiswa yangoku. Isakhiwo Ngokomzi kwaye mhle, kwaye uqhagamshelwano kulula kwaye bakhuselekile. Ngokuyilwa seemodyuli, ngokusebenza nzima Umgca lahlule ke lula ukuba nsinya nje screwdriver. Kwangaxeshanye, lo mnqongo ukuba spliced ​​ngokweemfuno yesebe kanye, leyo usindisa kakhulu iindleko iindleko zabasebenzi kunye nesithuba, kwaye uqhagamshelwano intle kakhulu.
uxhulumaniso Soft Sebenzisa imivalo ubhedu ethambileyo ukudibanisa eyenziwayo kunye busbars
uxhulumaniso ezingamaphepha zenziwa usebenzisa imivalo copper busbars
Ubukhulu ezithile ngokungqinelana imfuneko eyiyo ukujonga iinkcukacha, nceda usinike ukusetyenziswa imibuzo imfuno.
Ubungakanani Case: 630 * 214 * 92
ibhasi AMJ2integrated busbar Integrated
Main Switch 400A ontlantlu-ntathu icala oluxonxiweyo sivula
Inkqutyana utshintsho 100A ontlantlu-ntathu icala oluxonxiweyo sivula
uqhagamshelo Main uqhagamshelo oluthambileyo
Inkqutyana uqhagamshelo uqhagamshelo oluthambileyo
● I-original ebalelelwe lilanga lobhedu lengubo ibe utshintsho zeemodyuli efakwe ngqo.
● mveliso onokuhlengahlengiswa ngeendlela ezahlukeneyo: iimbambo, inyathelo elilandelayo, ngaphandle phezu elilandelayo.
● umnqongo yethu yonke lengubo umqolo ethambileyo, iswitshi ngqo ngaphezulu mnqongo wokulinganisela, izithuba adjustable, ukunciphisa kakhulu isithuba isisu semoto.
● umqolo yethu engundoqo kunye sub-mqolo yenzelwe ngokukodwa isakhiwo uqinisa, ifanele iinkcukacha ezahlukeneyo bobhedu khosi ebetheka, amalungiselelo yotshintsho ukohlulwa, ukuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo abathengi.
● iqokobhe yokhuselo ngezinto PA66.
● I Umqolo engundoqo copper ezikumgangatho ophezulu.
● Standard: GB7251.1-2005, WO / T10316-2002;
● ibhasi elifutshane ukumelana yangoku (Icw): 18KA ngasentla;
● uxhulumaniso engenayo: ontlantlu-ntathu /-isigaba ezine 250A ~ 800A, umqolo ethambileyo okanye nzima;
● busbar: conductivity eliphezulu nickel zobhedu nesingxobo;
● shell protective: PA66;
● busbar ubukhulu: rated kwi 4-10mm;
● uqhagamshelo yesebe:-isigaba ezimbini ngaphezulu kwe-kwesigaba sesithathu / ngaphezulu kwe 63A, umqolo ethambileyo okanye nzima.
Shanghai IPKIS Power Technology Co., Ltd. ingqwalasela kwiinkqubo ibhokisi combiner ezihlangeneyo kunye nezibonelelo ezincedisayo, lombane unikezelo lwamandla iiseti olupheleleyo uphando uqhagamshelwano lombane ubugcisa kunye nophuhliso kunye nokusetyenziswa kunyaka-mali yophando lwenzululwazi ngeminyaka, isicelo patent yamkele ukuyilwa enobuhle circle, inguqu zophando lwezenzululwazi Kuyancomeka, Shanghai Tech lweshishini; inkampani kakuhle izinto eziluncedo zobungcali nobugcisa kwinkampani kwindlela yokusebenza ukunika izisombululo uqhagamshelwano lombane, ngentsebenziswano yethu yobungcali, ngexesha ngokukhawuleza, ukudala ixabiso ezongezelelweyo kubathengi, kunye abathengi benza close ukuxhasa ulwalamano, ngenxa iminyaka eliqela Kuye kwasekwa a imodeli zoshishino unique yaye yaseka isangqa eziphilayo ngokuhambelana kuphuhliso esempilweni kwamashishini. Phantsi imvelaphi langoku ngokugqithisileyo, ukuphuculwa zeteknoloji kunye nokudibana mveliso, kuyimfuneko ukuhlola ngokubonakalayo iingcamango ezintsha ukuze ukhuseleke kunye nophuhliso lwamashishini amancinane.
umgangatho Product ikhadi yeshishini lethu, umgangatho singayenzi diki-diki. Likwaxhalatyiswa ngumba iinkcukacha, ukuphucuka okuqhubekayo, esi satifikethi mnye, ukuba ummeli kwabasebenzi bonke IPKISer kaThixo.
Previous: Back-enyusiweyo-in-nye amane photovoltaic AC theory amacandelo ezihlangeneyo AMJ1-2503S / 0633SX4
Okulandelayo: Idla ezintandathu ibe photovoltaic AC theory ezihlangeneyo components AMJ2-4003H / 1003HX6
180a Box Distribution Electrical
6 Ngowe-1 Combiner Box
DC Box Distribution Electrical
iPhaneli Combiner Box Solar
PV Array Umtya Combiner Box
PV iPhaneli String Box
PV Kuya kukhethwa iiphaneli Solar Box Combiner
Solar Imodyuli Junction Box
Solar Imodyuli String Box
Kuya kukhethwa iiphaneli Solar DC Combiner Box
Back-shelwe abane-in-nye photovoltaic AC conver ...
Ulenga phantsi yendlela emithathu ibe conver PV AC ...
Back-ubeku ezithathu-in-nye photovoltaic AC idibane ...
Yehagu ibe kukuhlangana AC photovoltaic i ezisibhozo ...
Idilesi: Shanghai IPKIS Power Technology Co., Ltd